Koshesa Chipo chaMwari Cheupenyu Neropa
Koshesa Upenyu Hwawakapiwa
1. Ndiani akatipa upenyu?
JEHOVHA ‘ndiMwari mupenyu.’ (Jeremiya 10:10) Ndiye Musiki wedu uye akatipa upenyu. Bhaibheri rinoti: “Makasika zvinhu zvese, uye nekuda kwenyu zvakavapo uye zvakasikwa.” (Zvakazarurwa 4:11) Izvi zvinoreva kuti Jehovha aida kuti tive neupenyu. Upenyu chipo chinokosha chinobva kwaari.—Verenga Pisarema 36:9.
2. Tingaitei kuti tive neupenyu hwakanaka?
2 Jehovha anotipa zvatinoda kuti tirambe tiri vapenyu, zvakadai sezvekudya nemvura. (Mabasa 17:28) Chinotokosha kupfuura izvozvo ndechekuti anoda kuti tinakidzwe neupenyu. (Mabasa 14:15-17) Kuti tive neupenyu hwakanaka, tinofanira kuteerera mitemo yaMwari.—Isaya 48:17, 18.
MWARI ANOONA SEI UPENYU?
3. Kaini paakauraya Abheri, Jehovha akaitei?
3 Bhaibheri rinotidzidzisa kuti upenyu hwedu uye hwevamwe vanhu hunokosha kuna Jehovha. Kaini, mwanakomana waAdhamu naEvha, paakatsamwira munin’ina wake Abheri, Jehovha akamuyambira kuti aifanira kudzora hasha dzake. Asi Kaini haana kuteerera. Akatsamwa chaizvo zvekuti “akarwisa munin’ina wake Abheri, akamuuraya.” (Genesisi 4:3-8) Jehovha akaranga Kaini nekuuraya kwaakaita Abheri. (Genesisi 4:9-11) Saka hasha uye ruvengo zvakaipa chaizvo nekuti zvinogona kuita kuti tirwise vamwe kana kuvaitira utsinye. Munhu akadaro haakwanisi kuwana upenyu husingaperi. (Verenga 1 Johani 3:15.) Kuti tifadze Jehovha, tinofanira kudzidza kuda vanhu vese.—1 Johani 3:11, 12.
4. Mumwe wemirayiro yakapiwa vaIsraeri naMwari unotidzidzisei nezvechipo cheupenyu?
4 Pashure pezviuru zvemakore, Jehovha akaratidza kuti anokoshesa chaizvo upenyu paakapa Mozisi Mirayiro Gumi. Mumwe wacho unoti: “Usauraya.” (Dheuteronomi 5:17) Munhu aiuraya mumwe munhu nemaune, aifanira kuurayiwa.
5. Mwari anoona sei kubvisa pamuviri?
5 Mwari anoona sei kubvisa pamuviri? Kunyange upenyu hwemwana asati aberekwa hunokosha kuna Jehovha. MuMutemo wakapiwa vaIsraeri naJehovha, Jehovha akati kana munhu akakuvadza mukadzi ane pamuviri, mwana wacho ofa, akuvadza wacho aiurayiwa. (Verenga Eksodho 21:22, 23; Pisarema 127:3.) Izvi zvinotidzidzisa kuti kubvisa pamuviri kwakaipa.—Ona Mamwe Mashoko 26.
6, 7. Tinoratidza sei Jehovha kuti tinokoshesa upenyu?
6 Tingaratidza sei Jehovha kuti tinokoshesa upenyu hwedu uye hwevamwe? Tinozviratidza nekusaita chero chinhu chinoita kuti upenyu hwedu kana hwevamwe huve pangozi. Saka hatizoshandisi fodya kana mbanje kana kuita zvemadhiragi nekuti zvinotikuvadza uye zvinogona kutiuraya.
7 Mwari akatipa upenyu nemiviri zvatiinazvo, uye tinofanira kuzvishandisa sezvaanoda. Saka tinofanira kunyatsochengeta miviri yedu. Kana tikasadaro, Mwari achationa sevanhu vasina kuchena. (VaRoma 6:19; 12:1; 2 VaKorinde 7:1) Hatingakwanisi kunamata Jehovha uyo akatipa upenyu kana tisingakoshesi upenyu hwacho. Kunyange zvazvo zvingasava nyore kurega zvinhu zvakadai sekuputa, Jehovha achatibatsira kana tichiedza kuzvisiya nekuti tinoona kuti upenyu hunokosha.
8. Tingaitei kuti tive nechokwadi chekuti hatiisi upenyu hwedu kana hwevamwe pangozi?
8 Tadzidza kuti upenyu chipo chinokosha. Jehovha anovimba kuti tichaita zvese zvatinogona kuti tisaise upenyu hwedu kana hwevamwe pangozi. Tinoratidza izvi pakutyaira kwatinoita mota dzedu, midhudhudhu kana zvimwewo zvatinoshandisa pakufamba. Hatizoiti mitambo inokuvadza kana yekurwisana. (Pisarema 11:5) Tinoitawo zvese zvatinogona kuti dzimba dzedu dzisava nezvinhu zvinokonzera njodzi. Jehovha akarayira vaIsraeri kuti: “Kana ukavaka imba, unofanira kuvaka kamudhuri kanopoteredza denga racho, kuti urege kuisa mhosva yekudeura ropa paimba yako mumwe munhu adonha achibva pairi.”—Dheuteronomi 22:8.
9. Tinofanira kubata sei mhuka?
9 Kunyange mabatiro atinoita mhuka anokoshawo kuna Jehovha. Anotibvumira kuuraya mhuka kuti tiwane zvekudya uye zvipfeko, uye kana mhuka ichiita kuti upenyu hwedu huve pangozi anotibvumira kuiuraya. (Genesisi 3:21; 9:3; Eksodho 21:28) Asi hatifaniri kuitira mhuka utsinye kana kungonakidzwa nekudziuraya.—Zvirevo 12:10.
Hatiurayi mwana asati aberekwa
Hatishandisi fodya kana mbanje kana kuita zvemadhiragi
Hativengi vamwe vanhu
ONA UPENYU SEHUTSVENE
10. Tinoziva sei kuti ropa rinomiririra upenyu?
10 Ropa rinokosha kuna Jehovha nekuti rinomiririra upenyu. Kaini paakauraya Abheri, Jehovha akamuudza kuti: “Ropa remunin’ina wako riri kushevedzera kwandiri riri panyika.” (Genesisi 4:10) Ropa raAbheri raimiririra upenyu hwake, uye Jehovha akaranga Kaini nekuti akanga auraya Abheri. Pashure peMafashamo epanguva yaNoa, Jehovha akaratidza zvakare kuti ropa rinomiririra upenyu. Jehovha akabvumira Noa nemhuri yake kudya nyama yemhuka. Akati: “Munogona henyu kudya mhuka dzese mhenyu dzinofamba. Ndinokupai dzese, sekukupai kwandakaita zvinomera zvakasvibirira.” Asi pane chimwe chinhu chavakanzi naJehovha vasadya. Vakanzi: “Nyama ine upenyu hwayo, iro ropa rayo, musaidya.”—Genesisi 1:29; 9:3, 4.
11. Mwari akapa vaIsraeri mutemo upi une chekuita neropa?
11 Pashure pemakore anenge 800 Jehovha audza Noa kuti asadya ropa, akaudzazve vanhu vake kuti: “Kana mumwe wevaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu akaenda kunovhima obata mhuka kana kuti shiri inodyiwa, anofanira kudurura ropa rayo orifushira neguruva.” Akabva ati: “Hamufaniri kudya ropa.” (Revhitiko 17:13, 14) Jehovha akanga achiri kuda kuti vanhu vake vazive kuti ropa idzvene. Vaigona kudya nyama, kwete ropa. Pavaiuraya mhuka vachida kuidya, vaifanira kudurura ropa rayo pasi.
12. VaKristu vanoona sei ropa?
12 Pashure pemakore Jesu afa, vaapostora nevakuru vaiva muungano yechiKristu muJerusarema vakaungana kuti vaone kuti pamitemo yakanga yakapiwa vaIsraeri, ndeipi yakanga ichiri kushanda kuvaKristu. (Verenga Mabasa 15:28, 29; 21:25.) Jehovha akavabatsira kunzwisisa kuti akanga achiri kukoshesa ropa uye kuti vaifanira kuramba vachiriona sedzvene. VaKristu vekutanga vakanga vasingadyi kana kunwa ropa kana kudya nyama yainge isina kunyatsobviswa ropa rayo. Kudai vaizoita izvozvo, zvainge zvakaipa kungofanana nekunamata zvidhori kana kuita upombwe. Kubvira ipapo, vaKristu vechokwadi vairamba kudya kana kunwa ropa. Ko mazuva ano? Jehovha achiri kungoda kuti tione ropa sedzvene.
13. Nei vaKristu vasingabvumi kuwedzerwa ropa?
13 Izvi zvinoreva here kuti vaKristu havafaniriwo kuwedzerwa ropa pavanorapwa? Hongu ndizvozvo. Jehovha akatirayira kuti tisadya kana kunwa ropa. Zvine musoro here kuti kana chiremba akakurambidza kunwa doro woti ndinogona zvangu kuita rekuiswa nemutsinga? Hazvina! Saka patinonzi tisadya kana kunwa ropa, zvinorevawo kuti hatifaniri kuwedzerwa ropa.—Ona Mamwe Mashoko 27.
14, 15. Nei muKristu achifanira kukoshesa upenyu uye kuteerera Jehovha?
14 Ko kana chiremba akatiudza kuti tinofa kana tikasawedzerwa ropa? Mumwe nemumwe anofanira kusarudza kana achida kuteerera mutemo waMwari panyaya yeropa. VaKristu vanoremekedza chaizvo chipo chaMwari cheupenyu, saka tichatsvaga dzimwe nzira dzekurapwa kuti tirambe tiri vapenyu; asi hatizobvumi kuwedzerwa ropa.
15 Tinoedza chaizvo kuchengetedza utano, asi sezvo upenyu huchikosha kuna Mwari, hatizobvumi kuwedzerwa ropa. Zvinokosha chaizvo kuti titeerere Jehovha pane kuedza kurebesa upenyu hwedu tichityora mitemo yake. Jesu akati: “Munhu wese anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi munhu wese anorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu achahuwana.” (Mateu 16:25) Tinoda kuteeerera Jehovha nekuti tinomuda. Anoziva zvakanyatsotinakira. Saka isu tinoona upenyu sechinhu chinokosha uye chitsvene semaonero anoitawo Jehovha.—VaHebheru 11:6.
16. Nei vanamati vaMwari vachimuteerera?
16 Vanamati vaMwari vakatendeka vanoteerera mutemo wake une chekuita neropa kunyange zvikaoma. Havadyi kana kunwa ropa uye havabvumi kuwedzerwa ropa vachirapwa. * Asi vanobvuma kurapwa nedzimwe nzira kuti vachengetedze upenyu. Vanoziva kuti wacho akaita kuti upenyu huvepo uye akasika ropa anoziva zvakanyatsovanakira. Unobvuma here kuti anoziva zvakanyatsokunakira?
KUSHANDISWA KWEROPA KUMWE CHETE KWAKABVUMIRWA NAJEHOVHA
17. Ndepapi paingobvumirwa vaIsraeri kushandisa ropa naJehovha?
17 MuMutemo wakapiwa Mozisi naMwari, Jehovha akaudza vaIsraeri kuti: “Upenyu hwenyama huri muropa, uye ini ndakariisa paatari kuti imi muzviyananisire [kana kuti mukumbire ruregerero], nekuti ropa ndiro rinoyananisira.” (Revhitiko 17:11) VaIsraeri pavaitadza, vaigona kukumbira Jehovha ruregerero nekubayira mhuka uye kukumbira mupristi kudurura rimwe ropa rayo paatari yaiva patemberi. Ipapa ndipo chete paibvumira Jehovha kuti vaIsraeri vashandise ropa.
18. Chibayiro chaJesu chakaita kuti tive nemukana wei?
18 Jesu paakauya panyika, akatsiva mutemo wekupa zvibayiro zvemhuka nekupa kwaakaita upenyu hwake, kana kuti ropa rake, kuti tiregererwe zvivi zvedu. (Mateu 20:28; VaHebheru 10:1) Upenyu hwaJesu hwaikosha chaizvo zvekuti paakamutswa naJehovha akaenda kudenga, Jehovha akanga ava kukwanisa kupa vanhu vese mukana wekuti vararame nekusingaperi.—Johani 3:16; VaHebheru 9:11, 12; 1 Petro 1:18, 19.
Ungaratidza sei kuti unokoshesa upenyu neropa?
19. Tinofanira kuitei kuti tive vakachena “paropa revanhu vese”?
19 Tinotenda Jehovha nechipo chakanakisisa chaakatipa cheupenyu! Uye tinoda kuudza vanhu kuti kana vakatenda muna Jesu, vanogona kurarama nekusingaperi. Tinoda vanhu, saka tichaita zvese zvatinogona kuvadzidzisa zvavangaita kuti vawane upenyu. (Ezekieri 3:17-21) Kana tikadaro, tichabva takwanisawo kutaura sezvakaitwa nemuapostora Pauro, uyo akati: “Ndakachena paropa revanhu vese . . . , nekuti handina kumborega kukuudzai zvinhu zvese nezvechinangwa chaMwari.” (Mabasa 20:26, 27) Saka tinokoshesa chaizvo upenyu neropa patinoudza vamwe nezvaJehovha uye kukoshesa kwaanoita upenyu.
^ ndima 16 Ona mamwe mashoko panyaya yekuwedzerwa ropa pamapeji 77-79 ebhuku rinonzi “Rambai Muri Murudo rwaMwari,” rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
DZIDZISO 1: KOSHESA UPENYU HWAWAKAPIWA
“Kwamuri ndiko kunobva upenyu.”—Pisarema 36:9
Tingaratidza sei kuti tinokoshesa upenyu?
Mabasa 17:28; Zvakazarurwa 4:11
Upenyu chipo chinobva kuna Jehovha uye tinofanira kuhukoshesa.
Eksodho 21:22, 23; Dheuteronomi 5:17
Kuuraya uye kubvisa pamuviri kwakaipa.
1 Johani 3:11, 12, 15
2 VaKorinde 7:1
Siyana nemaitiro akaipa akadai sekuputa uye kuita zvemadhiragi.
Usaita mitambo inokuvadza kana yekurwisana.
DZIDZISO 2: UPENYU NEROPA
“Nekuti upenyu hwenyama yese ndiro ropa rayo, nekuti mariri ndimo mune upenyu.”—Revhitiko 17:14
Mwari anoona sei upenyu neropa?
Genesisi 4:10; Dheuteronomi 12:23
Ropa rinomiririra upenyu.
Tinogona hedu kudya nyama kwete ropa.
Mabasa 15:28, 29; 21:25
Murayiro waMwari wekuti tinofanira kurega ropa unosanganisira kusawedzerwa ropa patinorapwa.
Ushamwari hwedu naJehovha ndihwo hunonyanya kukosha muupenyu hwedu.
DZIDZISO 3: KUSHANDISWA KWEROPA KWAKABVUMIRWA NAJEHOVHA
“Ropa raJesu . . . rinotichenesa pazvivi zvese.”—1 Johani 1:7
Chibayiro chaJesu chinoita kuti tive nemukana wei?
VaIsraeri pavaitadza, vaigona kukumbira Jehovha ruregerero nekubayira mhuka uye kukumbira mupristi kudurura rimwe ropa rayo paatari.
Mateu 20:28; VaHebheru 9:11-14
Jesu paakauya panyika, akatsiva mutemo wekupa zvibayiro zvemhuka nekupa kwaakaita upenyu hwake, kana kuti ropa rake, kuti tiregererwe zvivi zvedu.
Upenyu hwaJesu hwaikosha chaizvo zvekuti paakamutswa naJehovha akaenda kudenga, Jehovha akapa vanhu vese vanotenda muna Jesu mukana wekuti vararame nekusingaperi.
Ona Upenyu Sezvinoita Mwari (Chikamu 1)
Ona Upenyu Sezvinoita Mwari (Chikamu 2)
Zvapupu zvaJehovha Zvinobvuma Kurapwa Kuchipatara Here?
Zvapupu zvaJehovha zvinobvuma kurapwa kuchipatara chero bedzi marapiro acho asingapesani nezvinodzidziswa neBhaibheri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Koshesa Upenyu Hwawakapiwa
bhs chits. 13 pp. 135-144